Madax-Xanuunkii Ole Gunnar Solskjaer Ku Haystay Man United Oo Heerkale Gaadhay & Xiddig Muhiim U Ah Oo Dhaawacmay - Gool24.Net
Madax-Xanuunkii Ole Gunnar Solskjaer Ku Haystay Man United Oo Heerkale Gaadhay & Xiddig Muhiim U Ah Oo Dhaawacmay
October 9, 2020 Apdihakem Omer Adam
Dhibaatooyinka gaar ahaan kuwa daafac ee haystay kooxda Manchester United ayaa heerkale kusii socda kaddib markii uu daafaca dhexe ee kooxdaas ee Eric Bailly xalay ku dhaawacmay kulankii uu xulkiisa Ivory Coast bar-bardhaca lasoo galay Belgium.
Eric Bailly ayaa ku qasbanaaday in bedel lagu sameeyo daqiiqadii 70-aad ee kulankii xalay iyadoo uu dhaawaciisu u muuqday mid muruq ah.
Dhaawaca Bailly ayaa dhirbaaxo kale ku ah Man United maadaama oo horeba Solskjaer ay dhibaatooyin daafac u haysteen oo ay kulankii ugu dambeeyay guuldarro 6-1 ah kala soo kulmeen kooxda Tottenham oo marti u ahayd.
Eric ayaa kulankaas kasoo hormaray Victor Lindelof iyadoo uu Ole shaxda uu jecel yahay ee 4-2-3-1 uu kusoo shirtagay balse daafaca ree Sweden ayaa hadda dib u heli doona booskiisa marka fasaxa qaramada laga soo laabto.
Kaddib markii uu Chris Smalling maalintii ugu dambaysay suuqii xagaaga u wareegay dhinaca AS Roma, Solskjaer ayay ku yar yihiin daafacyada kaabista u ah Harry Maguire iyo Lindelof ee uu aaminsan yahay.
Phil Jones iyo Marcos Rojo ayaa labadaba laga reebay liiska Champions League ee kooxdooda taas oo tilmaamaysa inaysan haysan kalsoonida Solskjaer.
Da’yarka khadka dhexe ee Red Devils ee Scott McTominay ayaa ah mid daafac dhexe ciyaari kara maadaama oo uu xulkiisa Scotland halkaas uga soo ciyaaray balse maaha booskiisa asalka ah.
Dookh kale ayaa ah 22 sano jirka kooxdaas ee Axel Tuanzebe oo kusoo laabtay tababarka koowaad ee kooxdiisa walow uusan tan iyo wareegii Carabao Cup ee siddeed dhammaadka ee xilli ciyaareedkii hore kulan ciyaarin.